Q-6aad taxanihii adeegto – dhugasho
maxamedsheekafguun Seteembar 18, 2020 sheekooyin
Q-6aad taxanihii adeegto
Muuqaalkeedu wuxuu ahaa qof inta awalba itaal la’aa haddana tan dhex galay. Madax yare laba indhoodoo galka ka baxsan oo roggooda ama daymooyinkooduna meel keliya haysato. Af laba daan noqday. luqun aad mooddo in kol hore naftu daysay oo qallalan bay la soo qotontay.
Libaaxii markuu cabbaar meeshii gilgiley siduu rabeyna ay u noqon weydey oo Maryan soo dhici weydey buu inta jinjimicsaday, ilka aad mooddo qoryo miibac ahoo meel ku raaranna muujiyey carrab aad mooddo sanbab cabbaar kawraxsana intuu hadba dhan u eryey shaarubahana marsaday buu tartiib sidii wax tagaya u sii tallaabsaday.
Maryan way garansiisnayd inuunan ka dheeraan doonine iyada uu is leeyahay aad dagtid, waa intaasoo ay is tiraahdaa tagye meesha ka carar.
Markaas waqtigu waa galin dambe waagiina ma foga, Libaaxuna wuxuuba dhibsanayaa waaga ku baryaya isagoo ka xun casho la’aanta ku dhacday caawa.
Ma uu fogaane intuu meel ku dhow dhabbacday buu si qarsoodi ah il qooreedda ka eegayaa Maryan. Inantiiba ooggii baa istaagay iyadoo sidii kuurka la isugu jiro, isagiiyoo halkii wax jeeqaaqaya ayaa dhegtiisu jabaq maqashay. Intuu sidii wax xanaaqay boodey buu u kuur galay waxa jabaqda yeertay tahay. Wuxuu ka xumaa in laga sii daayo qofkan u xiranee isaga siday la tahay uu maray noqotaba afka u ridan doono. Wuxuu dhegeystaba wuxuu ogaday in hadal soo galayo. Wuxuu ku tallamay inuu dadka soo socda intuu u kuur galo wax ka qaato iyo inuu tiisatan majinta uga xiran ku nasiibsado.
Bulaankii iyo ragga hadlaya badnâantiisa ayaa ka cabsi galisay inuu iyaga weerarro, taasoo uu isyiri armay kugu dhacdaa wax badso wax waa bay leedahay.
Waxaa jiray in meeshu dhabbe haloosi ahee dhaanka iyo safarradu kala go’in ahayd. Waxa soo bulaamayaana yahay safar cidaha ka yimide magaalada u socda. Waxaana wata rag hub ka buuxee ugu soo tala galay inay isaga daafacaan dad iyo dugaagba.
Libaaxii arag in arrintu qasan tahay waxa soo socdaana ayan kaba leexanayne iyaga uun ku soo fool leeyihiin. Wuxuu goostay inuu Maryan mar kale weerár cabsi galin ah ku qaado, waa intaasoy hadda hurudaayoo ay soo dhacdaaye. Safarkii marka waxba uma jiro oo kobtuubaa madaxa soo gelinayaa, Maryanna mar horayba maqashay bulaanka dadka walowba ay aad ugu adag tahay siday afka hadal uga soo saari lahaydoo waxay u muuqatay ruux naftu ku sii daba yar tahay. Waxaa isugu darmay baqdin caguhu la barareen, caqasho iyo daal, sababahaa daraaddood, dabadeedna halka ay. fursadda lama helaanka ah, ku gefto.
Waxay is tiri qaylo sii bilow intaan laguba soo gaarin amaan lagu dhaafinba, ha yeeshee way kari wayday. Aragtay inay qalalan tahay. Dhawr kol oo is daba joog ah bay isku dayday afkeeduse awood uma yeelan inuu qaylo ama hadalba sameeyo oo intuu kala tagey buu u ekaa mid aan hawshaasba layan isagu. lyadoo laantii ku maran bay damacday dheh “Haah waaw, qaaq, aaa,” Kumase ay guuleysan. Niyadda way ka lahayd qayladaas, ha yeeshee mid laanta ay haysataa maqalayso ma ahayn.
Libaaxii oo kankoonsan ayaa geedkii soo galay. Isagoo qayliyo xaruun isku qasaya buu haddana bootin intii itaalkiis ah soo boodey. Wuxuu qabsaday meel dhexe oo geedka jirriddiisa ah kumase daahine haddiiba wuu ka dhacay. Aad buu u cuslaa una qaraaxad weynaa.
Maryan inkastoy si walba u naxday suuxina gaartay haddana soomay dhicine meesheedii bay isku kaduudday.
Markii libaaxu qaylada bilaabayba waxaa diday awrtii safarka ahayde markaa aan waxba u jirin. Xargo adag ama hoggaamo la saantay iyadoo iskuna xirnayd ragga wataana awalba aad uga feejignaa dartii ayaysan xarga-goosane haddiiba inta mid mid loo gar qabtay qoryihiina la rogtay dhawr xabbadood meeshii libaaxu ka gurxamay la dul mariyey.
Intaan la ridin xabbadaha ayaa ninkii ugu da weynaa meeshaa waaya aragnimadana is bidayey hadal qaylo ah wuxuu ku yiri; “yur, yur, yur, war xabbadaha hoos ha ugu dhigina bahalkee kor mariya, ha inaka tagee. in uusan ina ku dhaawacmin baa roone,” Markay korkiisa ka onkodday ayuu orod is jaray. Raggii awrta safarka ah watay inta nin iyo awr loo wada gar qabtay, hareerahana la iska taagay ba la yiri, “aan u sugno oo yaan awrta inta waagu si fiican u baryayo la xiriinin waa intaasoo ay xarga goosataaye,” meeshiiba la hogtay. Waana goon bannaan meeshu walowba kaymo jiq ahi ku dhowaayeen. Raggu wuxuu aad ula socday daymada awrta oo iyadu uga indha fiiqan ugana dhega wedden ragga Libaaxa dhaqdhaqaaqiisa.
Sidii xoon shinniyeedoo godkii laga jabsaday bay qoortoodii is galooleen waaga caddaadkiisana sugeen taasoo ay aad uga feejignayeen in libaaxaasi wax ka halakeeyo.
Maryan bay ahayd qoftii markii xabbaduhu dhawr jeer dul mareen iyagoo geedkay fuushanayd laama badan ka daadshey inta dhegihii u furmeen awooddey inay qaylo, oohin, baroor iyo muusanno aan kala go’ lahayn oodda ka soo qaadday, “Waa wareey!, waa wareey!, waryaaya!, waryaaya!. war bahalka iga dhiciya!. alla wuu cunaya!, waaw,- waaw,- waa, waaw …..”